Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/www.1000114.com/index/temp_block/www.dybxf.com/nlbhisyqphnhvhtml.php): failed to open stream: No space left on device in /www/wwwroot/www.1000114.com/index.php on line 131
အကြောင်းအရာပေါင်း ၁၀၀၀၆၇ ခုကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ ဈ ဉ | ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ 欧美性色黄大片欧美性色黄大片,樱羽的喉咙樱羽的喉咙,附带海岸附带海岸 ထ ဒ ဓ န
ယနေ့သည် – ၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
ချားလ် ဒစ်ကင်း၏ ခရစ်စမတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဝတ္ထုမှ ခေါင်းစဉ်ပါစာမျက်နှာ၊ ပထမအကြိမ်မူ
ခရစ်စမတ်သီချင်းတစ်ပုဒ် (အင်္ဂလိပ်: A Christmas Carol) သည် ချားလ် ဒစ်ကင်း ရေးသားသော လုံးချင်းဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်၍ နာမည်အပြည့်အစုံမှာ A Christmas Carol. In Prose. BeingaGhost Story of Christmas ဖြစ်သည်။ ဂျွန်လိချ်က သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲပေး၍ ၁၈၄၃ တွင် ချပ်မန်းနှင့် ဟောလ် (Chapman & Hall) စာပေထုတ်ဝေရေးက ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤဝတ္ထုသည် "အဘန်နဇာ စခရုဂျ်"(Ebenezer Scrooge) ၏ ဇာတ်လမ်းဖြစ်၍ စခရုဂျ်သည် ကပ်စေးနဲကော်တရာလူစား ဖြစ်ကာ ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် "ဂျေးကာ့ဘ် မားလီ" (Jacob Marley) ကွယ်လွန်အပြီး ခုနှစ်နှစ်မြောက်တွင် ဘဝပြောင်းသွားပြီဖြစ်သော မားလီက တစ္ဆေဘဝဖြင့် လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ယင်းနောက် အတိတ်ခရစ်စမတ်တစ္ဆေ၊ မျက်မှောက်ခရစ်စမတ်တစ္ဆေ၊ အနာဂတ်ခရစ်စမတ်တစ္ဆေ စသည်တို့ကလည်း လာရောက်တွေ့ဆုံကြသည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့လာရောက်တွေ့ဆုံမှုများအပြီး စခရုဂျ်သည် ကြင်နာစာနာတတ်သော၊ နူးညံ့သောသူအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့လေသည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးရန် တန်းစီနေကြစဉ်
၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ဂျိုး ဘိုင်ဒင် နှင့် ကားမလာ ဟဲရစ်တို့ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ကဘူးလ်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း၌ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၃၅ ဦးသေဆုံးပြီး ၅၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ဘောလုံးသမိုင်း၌ ၂၀ရာစု၏ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်သော အာဂျင်တီးနားသား ဒီယဲဂို မာရာဒိုနာသည် နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်း
ဤဝီကီပီးဒီးယားကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ ၂၀၀၄ (၂၀၀၄) ခုနှစ်မှ စတင်၍ ယခုအခါ အကြောင်းအရာပေါင်း ၁၀၀၀၆၇ ခုရှိပါသည်။
"/w/index.php?title=ဗဟိုစာမျက်နှာ&oldid=519323" မှ ရယူရန်